रोबिन्सन सूची, व्यापार कलहरूबाट छुटकारा पाउनुहोस्! | बेजिया
ल्यान्डलाइनमा मार्केटर र टेलिफोन अपरेटरहरूबाट कलहरू प्राप्त गर्न थालेको छ? तपाईंले अनुरोध नगरेको सेवाहरू प्रदान गर्न बिदामा तपाईंको मोबाइल पनि बज्छ? रोबिन्सन सूचीले तपाईंलाई सजिलै र नि:शुल्क अनुमति दिन्छ, कम्पनीको विज्ञापनबाट बच्नुहोस् जसमा तपाइँ तपाइँलाई विज्ञापन पठाउन तपाइँको सहमति दिनु भएको छैन।
रोबिन्सन सूची एक नि: शुल्क सेवा हो जसको सूचीमा जो कोही पनि सामेल हुन सक्छन् र त्यो टेलिफोन, हुलाक मेल, इमेल र SMS/MMS मार्फत विज्ञापनको लागि काम गर्दछ। यसो गर्नाले तपाईलाई पाँच मिनेट मात्र लाग्नेछ र तपाईले मानसिक शान्ति पाउनुहुनेछ। तपाईं थप जान्न चाहनुहुन्छ?
2 म कसरी रोबिन्सनको सूचीमा पुग्न सक्छु?
3 निरसन र निन्दा
यो नि:शुल्क विज्ञापन बहिष्करण सेवा हो, उपभोक्ताहरूका लागि उपलब्ध छ, जसले उनीहरूले प्राप्त गर्ने प्रचारको मात्रा घटाउने लक्ष्य राख्छ। यस सूचीमा दर्ता भएका जो कोहीले टेलिफोन कल, एसएमएस, इमेल, हुलाक मेल वा अनुहार मार्फत व्यावसायिक सञ्चारहरू प्राप्त गर्नबाट जोगिन्छन्।
रोबिन्सन लिस्ट एक नि:शुल्क विज्ञापन अप्ट-आउट सेवा हो जसले सुविधा दिन्छ AEPD को मान्यता (डेटा संरक्षणका लागि स्पेनिस एजेन्सी) र जसलाई स्पेनिस एसोसिएसन अफ डिजिटल इकोनोमीद्वारा व्यवस्थित गरिन्छ। यो निकाय स्पेनिस एसोसिएसन अफ डिजिटल इकोनोमी (ADIGITAL) सँग सम्बन्धित बहु ​​कम्पनीहरू बीचको सहमति सम्झौताबाट जन्मिएको हो र, जसको माध्यमबाट, तिनीहरूले यस फाइलमा दर्ता भएका नागरिकको अनुरोधलाई प्रचारको प्राप्तकर्ता नहोस् भनेर सम्मान गर्ने वाचा गर्छन्। तपाईंले स्पष्ट रूपमा अनुरोध गर्नुभएको छैन। अन्यथा, यी कम्पनीहरू AEPD लाई रिपोर्ट गर्न उत्तरदायी छन्।
म कसरी रोबिन्सनको सूचीमा पुग्न सक्छु?
कुनै पनि प्राकृतिक व्यक्ति तपाईं स्वैच्छिक र नि: शुल्क रबिन्सन सूचीमा सामेल हुन सक्नुहुन्छ। 14 वर्ष मुनिका नाबालिगहरूको हकमा, तथापि, तिनीहरूका आमाबाबु वा अभिभावकहरूले वेबसाइटद्वारा उपलब्ध गराएको फारम भर्नुपर्नेछ।
साइन अप गर्न, तपाईले गर्नुपर्ने भनेको गृह पृष्ठको बटन थिच्नु हो। "सूचीमा सामेल हुनुहोस्" र निर्देशनहरू पालना गर्नुहोस्। तपाईंले आफ्नो लागि वा 14 वर्ष भन्दा कम उमेरको व्यक्तिको लागि साइन अप गर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईंले पहिले छनोट गर्नुपर्छ र त्यसपछि तपाईंको सबै डाटाको साथ फारम भर्नुहोस्। त्यसो गरेपछि, तपाईंले आफ्नो दर्ता प्रमाणीकरण गर्न लिङ्कको साथ एउटा इमेल प्राप्त गर्नुहुनेछ र, एकपटक सकिसकेपछि, तपाईंले आफ्नो प्राथमिकता प्यानलमा विज्ञापन प्राप्त गर्न नचाहने च्यानलहरू प्रविष्ट गर्न सक्षम हुनुहुनेछ। संक्षिप्तमा:
वेबसाइट पहुँच गर्नुहोस् र क्लिक गर्नुहोस् "सूचीमा सामेल हुनुहोस्।"
मलाई रोज" वा "अर्को व्यक्तिलाई" यदि तपाइँ 14 वर्ष भन्दा कम उमेरको व्यक्तिलाई सूचीमा थप्न चाहनुहुन्छ भने।
फारम भर्नुहोस् आफ्नो डाटा संग र "साइन अप" मा क्लिक गर्नुहोस्
तपाईको इमेल इनबक्समा जानुहोस्, तपाईले एक प्राप्त गर्नुहुनेछ पुष्टिकरण इमेल तपाईंको खाता पुष्टि गर्न लिङ्कको साथ।
वेबमा क्लिक गर्नुहोस् "पहुँच" आफैलाई र आफ्नो प्यानलमा पहिचान गर्न आफ्नो प्राथमिकताहरू छान्नुहोस्।
यदि तपाइँ सूचीमा दर्ता हुनुहुन्छ भने, डाटा संरक्षण कानूनमा तोकिए अनुसार, तपाइँले तपाइँको सहमति नदिनुभएको र जसको तपाइँ ग्राहक हुनुहुन्न ती कम्पनीहरूले तपाइँलाई कुनै पनि अवस्थामा विज्ञापन पठाउन सक्षम हुने छैनन्। यद्यपि त्यहाँ सधैं एक विरासत नुक्कड फेला पार्ने छन् कानूनले पासो थाप्यो। तिनीहरू कम्तिमा छन् तर तिनीहरूबाट बच्नको लागि तपाईंलाई केही थप सुझावहरू चाहिन्छ।
निरसन र निन्दा
यदि मैले कम्पनीलाई मेरो सहमति दिएको छु तर अब म यसलाई रद्द गर्न चाहन्छु भने के हुन्छ? तपाइँ यसलाई तपाइँको प्राथमिकता प्यानल मा गर्न सक्नुहुन्छ "कल को रद्द"। यसले एउटा कम्पनीलाई संकेत गर्छ जसलाई तपाईंले आफ्नो सहमति दिनुभएको छ कि तपाईं अब विज्ञापन कलहरू प्राप्त गर्न चाहनुहुन्न।
यदि मैले मेरो सहमति नदिएको कम्पनीले मलाई कल गर्यो भने के हुन्छ? प्रत्येक कलमा तपाईलाई अधिकार छ कम्पनीलाई जानकारी दिनुहोस् कि तपाइँ कुनै थप प्रस्तावहरू प्राप्त गर्न चाहनुहुन्न उसको भागको लागि। जब यो हुन्छ, कम्पनीले प्रयोगकर्ताको निकासीसँग सम्बन्धित डाटा एक वर्षको लागि राख्नुपर्छ र हालको कानुनी नियमहरूको अनुपालनमा तिनीहरूको व्यक्तिगत डेटा प्रशोधन गर्नुपर्छ।
यदि त्यसो भए पनि कम्पनीले तपाइँको इच्छा विरुद्ध आफ्नो विज्ञापन अभियान कार्यान्वयन र लागू गर्न जारी राख्छ भने, यसलाई रिपोर्ट गर्नुहोस्! OCU बाट तिनीहरूले संकेत गर्दछ किaराख्दै आचरणको गुनासो र तेस्रो पक्षहरु द्वारा तपाइँको व्यक्तिगत डेटा को उपयोग को बारे मा विज्ञापन उत्पीड़न को सबै भन्दा प्रभावकारी समाधान हो।
के यो तपाईलाई उपयोगी भएको छ? के तपाईंलाई रोबिन्सनको सूची थाहा छ?
लेखको पूर्ण मार्ग: बेजिया » घर » रोबिन्सन सूची, व्यापार कलहरूबाट छुटकारा पाउनुहोस्!